Khabar Chitwan || बहिर्गमन ः धर्मको सुकर्म
बहिर्गमन ः धर्मको सुकर्म
गैँडाकोट एउटा आलोकनगर । गोविन्दराज विनोदी नामको साहित्यिक भाष्कर नै प्रयाप्त तमसोमा ज्योतिर्गमयका लागि । यिनै विनोदी नामको ज्ञान गंगामा नुहाउन पुगे गोपी सापकोटा । सहोदर भाइ धर्म सापकोटा राजु पनि विज्ञान पढ्दापढ्दै शब्दको जंगलमा हराउन पुगे । मति ढका पनि अब गैँडाकोटको दीपक बन्दैछन् । धर्म मेरा लागि नयाँ तर म उनका लागि पुरानो । नवलपरासीसित मेरो नाता दैवी । यसपाली लघुकथासग्रह बहिर्गमन लिएर आए राजु । राजुको कर्म जोख्ने तराजु बनेँ म । मेरो स्वभाव अलि बेग्लै । म पनि लघुकथामा रमाएको मान्छे । लघुकथा र चुट्किला बीचको भिन्नता धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्दछ । प्राडा गोविन्दराज भट्टराई धेरै भद्र र नरम समालोचक हुन् । तर लघुकथा र गजलका मामिलामा कहिलकाहीँ यी साहिँला पण्डित पनि कठोर बन्दछन् । म पनि उनकै भाइ कडा मास्टर । नक्कली प्रशंसा हुन्न मबाट । मुहार पुस्तिकामा धेरैले वाह….. वाह…. भनेर औपचारिकता निर्वाह गरेको ठाउँमा म अक्सर छुच्चो बन्न पुग्छु । धर्म सापकोटा राजुलाई पनि मैले मौखिक रुपमा त्यही भनेँ । सपाट वर्णन कथा बन्दैन, सूचना वा समाचार हुन्छ । लघुकथाको शक्ति भनेको त्यसले दिने झट्का हो ।
गजलको शक्ति तासिर । तासिर नभएको गजल शीर नभएको शरीर जस्तै हो । बहिर्गमन पढ्दै गएँ । धर्मलाई धनराजनियन शैलीमा भनेँ तिमीबाट राम्रो लघुकथा लेखिने सम्भावना छ । उनले पनि मबाट सस्तो प्रशंसा चाहनेछ । सुशिक्षित र सुझबुझ भएका चालिस कटेका यी युवक अपार सम्भावना बोकेर यो छुटै सन्सारमा हाम फालेका छन्, रवीन्द्र मिश्र जस्तै । रवीन्द्र मिश्रको भविष्यका बारेमा कपिल अज्ञात गुरुलाई जिम्मा लगाउँछु । धर्मका बारेमा त ढुक्कसित भन्छु, यिनी आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्छन् । अब म मूख्य समाचारतिर जान्छु । लघुकथा बहिर्गमन मा उनले मानवजीवनको एउटा रंग पस्किएका छन् । यो एउटा सन्देश पनि हो । पात्रहरुको नाम छैन । म पात्रबाट नै काम चलाएका छन् । हुर्किएको छोरोले बिहे गर्न नमान्दा अभिभावक चिन्तित छन्, कथा बोल्छ । तर छोरोको सपना अर्कै चिटिक्क परेकी नानीसित पहिले प्रेम गर्ने, अनि मात्र बिहे गर्ने उसको सपना साकार हुन्छ, प्रेम गर्ने चाहीँ । सायद केटी धेरै सोझी परिन् । केटाका हरेक चाहना पूरा गरिन्, बिबाहपूर्व नै । प्रेम प्रस्ताव केटाले राख्यो, बिवाहको प्रस्ताव केटीले राखिन् । उपयोगिता ह्रास नियम लागू भयो । चाखिसकेको फल चाख्न केटालाई मन लागेन । बहाना बनाएर उम्कियो, वा यसो भनौँ केटीमाथि ठूलो घात ग¥यो । लघुकथा भएको हुनाले कथा चाँडै टुंगियो । नत्रभने यो कथामा अझ धेरै कुरा देखाउन सकिन्थ्यो । कथाकार एवम् वरिष्ठ पत्रकार आश्विनी कोइरालाले प्रेम, सेक्स र बिवाह का बारेमा आफ्नो कथासंग्रह साइबर क्याफेमा रााम्रो चिरफार गरेका छन् । वास्तवमा मनसित मनको मिलन हो प्रेम, तनको भोक हो सेक्स र सामाजिक एवम् पारिवारिक सन्तुलन हो विवाह । प्रेममा सेक्स हुन सक्छ तर सेक्समा प्रेम नहुन पनि सक्छ । तसर्थ प्रेम गर्ने नयाँ पुस्ताले त्यसमा पनि युवतीले धेरै ध्यान दिनपर्ने कुरातिर यो कथाले संकेत गरेको छ । होइन भने यो नुनियाँमा अझै करोडौँ कुन्तीहरु फेला पर्छन् ।
आमा लघुकथा यो संग्रहको मास्टर पीस हो । स्याबास धर्म ! भन्न मन लोको कथा यही हो । आमा मानव जीवनमा सर्वोच्च पद हो । हुन त आमाले दुःख दिएका सन्तान पनि फेला पर्दछन् यो सन्सारमा । ती अपवाद आमा हुन् । होइन भने आमाको महिमा शब्दातीत । पत्नी पनि महत्वपूर्ण पात्र हुन् पुरुषको जीवनमा । तर आमासित तुलना गर्न मिल्दैन । यस कथामा पत्नीको लालशा र आमाको त्याग देखाइएको छ । हुन पनि यो भौतिक सन्सारमा एउटा पुरुष बाहिरबाट घर आउँदा आमाले पेट छाम्ने र पत्नीले गोजी छाम्ने कुरा हाम्रो लोकमा प्रचलित कथा हो । नाम लिन्न म । एकजना पात्र, निकै प्रख्यात, विदेशबाट स्वदेश आए । आउने बित्तिकै विरामी भए, उँधै उमै । फुड पोइजन । त्यही दिन विशेष कार्यक्रममा सहभागी भए । साँझ घर फर्किए । बाबु तिमीलाई कस्तो छ ? आमाको प्रश्न । कार्यक्रम कस्तो भयो ? पत्नीको प्रश्न । पात्र जिला । आमा र पत्नीबीचको अन्तर बुझे । बाँचे मेरो पोई, मरे सासूको छोरो यस्तो पनि भनिन्छ । तर यस्तो नभनिन पर्ने हो । यस्तो खेल्नुपर्दा म पनि लज्जित छु । सबै कुरा सापेक्ष हो ।
यतिखेर विदेशमा धेरै नेपालीका सन्तान छन् । विदेशमा सबैलाई उस्तै छैन । नारकीय जीवन पनि छ । पछुतो छ । दीर्घकालसमम आफन्तबाट छुट्नुपर्दा न्यास्रो लाग्छ । घर आउन मन लाग्छ । बचत छैन । आफन्तले अनेक उपहारको आश गर्दछन् । नाता नपर्ने छिमेकीले पनि चकलेटको आश गर्दछन् । कोसेली लघुकथामा धर्मले राम्रो कथा बुनेका छन् । केही ल्याउन पर्दैन भन्ने आफन्तहरुको असली रुप थाहा पाएपछि कथानायक जिल्ल पर्दछ । यो कथा पढिरहँदा मैले एक वर्ष अघिको आफ्नै भोगाइ सम्झिएँ । म यो उपहार र कोसेलीको चक्रव्यूहबाट उम्किन चाहन्छु । हो, मेरै घरमा उत्पादन भएको घिउ म मलाई साँच्ची नै माया र सम्मान ल्याउने काम मलाई अनुत्पादक, बोझिलो र झन्झटिलो लाग्दछ । एकजना नाता नै नपर्ने फेसबुके पात्र मैले एक गेडा मिठाई पनि नल्याएको भनेर बटारियो । तर मेरो छोराबुहारीले पनि कार्ड घोटे । म नखुश ! मानौँ विदेशमा गएपछि मान्छे कुबेर हुन्छ । मानौँ लक्ष्मीमाता प्रशन्न भएर डलरै डलर, पाउण्डको वर्षा गराउँछिन् । नेपाल नै स्वर्ग हो नेपालीका लागि । विदेश बाधयता ! सबै सन्तान विदेश पठाउने अभिभावकले यसो भन्दैछ । राजनीति शीर्षकको लघुकथा सूत्रकथा जस्तो भएको छ ।यो कथा पढ्दा मैले एकैपटक दुई पात्र सम्झिएँ । एक नेपाली राजनीतिका भस्मासुर गिरिजाबाबु र अर्का काद खान हिन्दी फिल्मका चरित्र अभिनेता । राजनीति गर्नेहरुको स्वभाव र चलाखीलाई सीप पु¥याएर कथा बुनेका छन् धर्मले ।
१४ गते शनिबार होटल ग्लोबलमा चियासँग कविता कार्यक्रममा धर्म सापकोटा राजुले कविता, गीत र गजल सुनाएर आफ्नो पुस्तक बहिर्गमनको गृह विमोचन पनि गराए । गोर्खा पब्लिकेशन अब नेपाली साहित्यको सेवामा जुर्मुराएर लागेको छ । बहिर्गमन माथि बोल्ने पात्र म एक्लो । मेरो काम हँसाउने हो, जहाँ पुगे पनि । धर्मले नामानुसारको कर्म पनि गर्दैछन् । धुर्मुश कम्पनीलाई किताब बेचेर आएको सम्पूर्ण रोयल्टी बुझाउने । परोपकारभन्दा ठूलो पूण्य अर्को छैन नै । बेलायत बसेर आफ्नो जीवनयापन गरिरहेका धर्मकै कारणले मीरा प्रसाइँ मेरो फेसबुके साथी बन्न पुगिन् । गोपी सापकोटासित मेरो पुरानै परिचय छ । अब लण्डन जानुछ । त्यहाँ गएर फेरि धर्मका लघुकथाहरुका बारेमा बोल्नु छ । ७१ वटा लघुकथाहरु एकसे एक बेजोड छन् भनेमा धर्म रिसाउँछन् । म उनलाई खुशी पार्न चाहन्छु । समाजको हरेक रंग टिप्न उनी सिपालु छन् । सामान्यभन्दा सामान्य पाठकले पनि आरामसित बुझ्न सक्छ । धर्मको यो सुकर्मले ख्याति आर्जन गरोस् । शुभकामना ।